JA11 လေကြောင်းဂျက်ရက်ကန်းစင် - တရုတ် Tianyi Group မှ
JA11 190 ~ 360 လေကြောင်းရန်ဂျက်ရက်ကန်းစင် JA11 စီးရီးလေကြောင်းဂျက်ရက်ကန်းစင် Qingdao အနီရောင်အလံအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားပူးတွဲခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ , JA11 စီးရီးလေ, အထည်အလိပ်ရက်ကန်းစင်၏အမြိုးမြိုးသောပေါင်းစပ်ပြီးအားသာချက်များကိုအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပနှင့်အဆင့်မြင့် technology.therefore မှတဆင့် Qingdao တက္ကသိုလ်နှင့်အတူပူးပေါင်း Ltd ဂျက်ဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးကိုဆုံးဖြတ်ရသော, အရည်အသွေးဗီဇမွေးဖွားဝါကြွားဒီထက်မက။ JA11 ၏ခုန် -off ရာအရပျက client များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းနှင့်အတူဒီထက်မကပူဇော်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျေနပ်စရာ requireme ပေါ် မူတည်. ...
JA11 190 ~ 360 လေကြောင်းရန်ဂျက်ရက်ကန်းစင်
JA11 စီးရီးလေကြောင်းဂျက်ရက်ကန်းစင် Qingdao အနီရောင်အလံအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားပူးတွဲခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ , အထည်အလိပ်ရက်ကန်းစင်၏အမြိုးမြိုးသောပေါင်းစပ်ပြီးအားသာချက်များကိုအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပနှင့်အဆင့်မြင့် technology.therefore မှတဆင့် Qingdao တက္ကသိုလ်နှင့်အတူပူးပေါင်း, JA11 စီးရီးလေကြောင်းဂျက်ရက်ကန်းစင်ဖွားမြင်အရည်အသွေးကိုဗီဇဝါကြွားတတ် Ltd, အရာသည်၎င်း၏ထူးခြားသောနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးကိုဆုံးဖြတ်သည်။
JA11 ၏ခုန် -off ရာအရပျက client များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းနှင့်အတူဒီထက်မကပူဇော်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားထုတ်ကုန်၏စိတ်ကျေနပ်စရာလိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်. ဒီရက်ကန်းစင် clients များအလေးအနက်စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် client များများအတွက် Credit ပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုအရာအများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်, get စေနိုင်သည်
နောက်တစ်ခု: JA11 မြင့်အနိမ့် dual-ရက်ကန်းစင်ရောင်ခြည်လေထုဂျက်ရက်ကန်းစင်